ဘန်ကောက်ရေကြီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံအချို့နှင့် နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘန်ကောက်ရေကြီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံအချို့နှင့် နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများ
ဘန်ကောက်ရေကြီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံအချို့နှင့် နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများ
Posted by ကိုကိုလူဆိုး on Oct 28, 2011 in Copy/Paste | 11 comments
အမျိုးသားဘောလုံးကွင်းမှာဖွင့်လစ်ထားတဲ့စခန်းတွင်းရှိ ရေဘေးဒုက္ခသည်တို့အတွက် ရေအစားထိုး အနုဇီဝအချိုရည်များပေးဝေရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ထိုင်းစစ်သားများက လုပ်ပေးနေပုံဖြစ်သည်။ ထိုင်းတပ်မသုံးခှမှ စစ်သည်ပေါင်း ၅၀၀၀ လောက်သည် ဗဟိုအစိုးရကို အတည်ပြုထားသော ရေဘေးဒုက္ခသည်များကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ကူညီရွှေ့ပြောင်းရေးအစီအစဉ်ကို ကူညီရန် အသင့်အနေအထားမှာရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်လာတဲ့တွေဟာ အရေးပေါ်ရေကာတာတွေ တမံတွေကိုချိုးဖေါက်ပြီ Khlong Talat နယ်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်၊ တလိပ်လိပ်တက်လာတဲ့ရေတွေဟာ ဒိုမောင်းလေဆိပ် ကားရပ်နားစခန်းတစ်ခုံးကိုပါ လွှမ်းမိုးသွားပြီး ၎င်းကားရပ်နားစခန်းဟာ ရေလွတ်နိုင်လိမ့်မယ် မျှောင်လင့်ချက်နဲ့ လာရောက်ရပ်နားထားတဲ့ကာတွေ များစွာရှိရာ နေရာလဲဖြစ်ပါတယ်။
Nonthaburi နယ် Bang Kruai-Jong Thanorm လမ်းပေါ်တစ်နေရာက ရေလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းနေရာကို Khlong Maha Sawat နယ်ကနေ ရေတွေ အလုံးအရင်းနှင့်ဝင်စီးလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်ရဲ့အဓိက အထင်ကရနေရာဖြစ်တဲ့ မြဘုရားပတ်လမ်းတလျှောက် ရေတွေပြည့်လျှံနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းနေရာဟာ ကျောက်ဘုရားမြစ်အနီးမှာရှိပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တို့ အဓိကလည်ပတ်လာရောက်ရာနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မြဘုရားပတ်လမ်းတစ်နေရာပါ။ ကျောက်ဘုရားမြစ်အနီးမှာရှိတဲ့အတွက် မြစ်ရေတိုက်ရိုက်စီးဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်
အစိုးရအိမ်တော်ကို ရေမ၀င်အောင် သဲအိပ်တွေဖြင့်ရေတမံဆောက်နေကြတဲ့ စေတာနာ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နေပြည်သူများအား ရေလွတ်ရာ နေရာများသို့ ရက်အတန်ကြာနေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရန် အစုိုးရမှ ကြေငြာချက်ထုပ်ပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်တကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့ စုဝဏ္ဏဘုံမိလေဆိပ်မှာ အိမ်ပြန်သူများနှင့်ပြည့်နှက်နေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့အပြင် ရေလွတ်ရာနယ်များကို ခရီးထွက်ကြတဲ့ခရီးသည်တွေဟာ တနေ့ကို ၂ သိန်းလောက်ရှိပြီး ဘတ်စကား အစီးရေ ၄ ထောင်လောက်နေ့စဉ်ပြေးဆွဲပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ Lak Si နယ်ထဲ ရေကြီးနေပုံဖြစ်ပါတယ်
ကျောက်ဖရားမြစ်မှလျှံကျလာသောရေထုကြောင့် ဖရချန် မော်တော်စိပ်အနီးရှိ နိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင်အတွင်း၌ ရေနစ်မြုပ်နေသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ။
ဘန်ကောက်မြို့ အနီးတ၀ိုက် ရေဘေးသင့်ဒေသခရိုင် ၂ ခုကို ရောက်ခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီ
သတင်းထောက် ငြိမ်းဇော်က သူမြင်တွေ့ခဲ့သမျှကို အခုလို မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်
Rangsit ဒေသမှာ ထိုင်းတွေရော၊ အဲဒီဒေသမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့
မြန်မာပြည်သားတွေရော ရေနဲ့လွတ်ကင်းရာကို သွားနေကြပါပြီ
ရေတွေကတော့ ၀င်လာမစဲပါ၊ ဒီကနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ မိုးထပ်ရွာနိုင်ချေရှိတယ်လို့ မိုးလေ၀သ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်
ရေကြီးမှု သတင်း ထုတ်ပြန်ရေးဌာနက ဒွန်မောင်းလေဆိပ်မှာ ရှိပါတယ်။
လေဆိပ်ထဲ ရေတွေဝင်လာတဲ့အတွက် အဲဒီဌာနကိုပါ နေရာရွှေ့ရတော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်
လေဆိပ်မှာ ခိုလှုံနေကြတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဘန်ကောက်မြို့သူမြို့သားတွေ
ဘန်ကောက်အပါအ၀င် ရေအကြီးအကျယ် ကြီးနေတဲ့ ခရိုင်တွေမှာ အစိုးရရုံးတွေ၊
ကျောင်းတွေကို ၅ ရက်ပိတ်လိုက်ပါပြီ
မိုးရွာလို့ ရေကြီးတာက ထိုင်းမှာ ရိုးနေပါပြီ။ ဒီတခါလောက်တော့ အကြီးအကျယ် မဖြစ်ခဲ့ဖူးပါ။
ဇူလိုင် ကတည်းက ကြီးလာတဲ့ရေကြောင့်
သေဆုံးသူ အရေအတွက်က မနေ့ကစာရင်းအရ ၃၆၆ ဦး ရှိပါပြီ
ရေကြောင့် လူပေါင်း ၂ သန်းခွဲ တိုက်ရိုက် ဒုက္ခရောက်နေပြီး ကူညီကယ်ဆယ်ရေး
စခန်းရောက်နေသူပေါင်း တသိန်းကျော် ရှိပါတယ်
ရေကြီးတဲ့အရပ်မို့ ကားရှိလည်း အလကားပါပဲ
ကားတွေကို ပစ်ထားလို့မရ အိတ်ထဲထည့်ထားလို့မရတာကြောင့် ရေမရောက်နိုင်မယ့်၊
ကိုယ် လက်လှမ်းမီတဲ့နေရာတွေမှာ ရပ်ထားကြပါတယ်
လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်မှာကိုလည်း အာဏာပိုင်တို့က စိတ်ပူနေပါတယ်
ရေဘေးသတင်း စောင့်နားထောင်သူအများအပြား အာဏာပိုင်တို့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်
အမျိုးမျိုးကြောင့်ရော၊ မကျသေးတဲ့ ရေတွေကြောင့်ပါ စိတ်ညစ်နေရပါတယ်
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ မနေ့က ရုပ်မြင်သံကြား မိန့်ခွန်းမှာတော့ ရေဘေးသင့်ဒေသအရပ်သားတွေကို
ပစ္စည်းပစ္စယတွေ ရေလွတ်ရာဒေသရွှေ့ဖို့၊ ဒီထက်ပိုပြီး ရေကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်ရေး
မနေ့ညက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ရုပ်သံမိန့်ခွန်းမှာတော့
အစိုးရိမ်ရဆုံးနေရာတွေထဲမှာ ချောင်ဖုယားမြစ်တလျှောက်ဒေသများ ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်
ရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် မိန့်ခွန်း
၀န်ကြီးချုပ်ခွန်ယင်လပ် ရုပ်သံမိန့်ခွန်း ထုတ်လွှင့်နေစဉ်
အစိုးရက အချိန်တိုအတွင်းမှာ ရေမြုပ်တဲ့အခြေအနေတွေကို လျော့ကျစေဖို့ ပိုင်းဖြတ်ထားပေမဲ့လည်း ဘန်ကောက်မြို့ ကြီးဟာ ၁၀ စင်တီမီတာကနေ တမီတာခွဲထိ ရေမြုပ်နိုင်တယ်လို့ ၀န်ကြီးချုပ် ယင်လပ်က ပြောပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့ညက ၀န်ကြီးချုပ်ခွန်ယင်လပ်က ရေလွှမ်းမိုးမှုထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့အကဲဖြတ်ချက်ကို ရုပ်မြင်သံကြားကနေ ထုတ်ဖော် ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ “အကြောင်း ၃ ချက်ထဲက တချက်ကြောင့် ရေဘေးက အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေတွေ ဖြစ် လာနိုင်တယ်။ အဲဒါကတော့ ရေတားအကာတွေကျိုးပေါက်ကုန်တာနဲ့ရေက ထင်ထားတာထက်ပိုကြီးလာမှာကြောင့် ဖြစ်တယ်” လို့ သူမက ပြောပါတယ်။ မြောက်ပိုင်းက အရှိန်နဲ့စီးလာတဲ့ရေတွေက အလယ်ပိုင်းဒေသကို ရောက်လာပြီ၊ ဒီရေထုတခုလုံးက ဘန်ကောက်ကိုဖြတ်ပြီး ပင်လယ်ထဲကို စီးဝင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သူမက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ ရေတံခါးတွေနဲ့ တမံတွေရဲ့ခံနိုင်ရည်ကို ရေက ကျော်ဖို့များမယ်။ ဒါကြောင့် ဘန်ကောက်အပြင်ပိုင်း၊ အလယ်၊ အတွင်းပိုင်းတွေကို ရေ၀င်ဖို့များတယ်။ ကျောက်ဖရားမြစ်ဘေးနားက ရေလွှမ်းနေတဲ့နေရာတွေက အန္တရာယ် အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ၀န်ကြီးချုပ်က ပြောပါတယ်။ ရေမြုပ်တာက အကြောင်း ၂ ချက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ရေတွေကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲသလဲ၊ ဒေသတခုချင်းစီရဲ့ပထ၀ီမြေအနိမ့်အမြင့် စတဲ့အပေါ်မှာ မှီနေတယ်လို့ သူမက ပြောပါတယ်။ ဘန်ကောက်အနောက်ပိုင်းမှာတော့ ပထုမ်ဌာနရီနဲ့ နွန်ထာဘူရီကလာတဲ့ရေတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ရှိသမျှ လုပ်နိုင်တာတွေ ကို အစိုးရက စုစည်းထားပါတယ်။ ရေတွေကို ကျောက်ဖရားမြစ်နဲ့ သာချီးန်မြစ် စတဲ့ ဒီမြစ်နှစ်ခုနဲ့ ဆက်နေတဲ့ မာဆာဝပ်တူးမြောင်ကတဆင့် ဖောက်ထုတ်မယ်။
ထုံဘူရီမှာရေမြုပ်တာ ခန့်မှန်းခြေ ၅၀ စင်တီမီတာလောက် ရှိတယ်။ ဒွန်မောန်းလေဆိပ်မှာ ယာယီစခန်းချနေကြတဲ့ ရေ ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ဘန်ကောက်နဲ့ အထက်ပိုင်းနေရာတွေကို ရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားပါတော့မယ်။ ရိက္ခာစုပုံ ထား တာကို လည်းဒွန်မောန်းကနေ အမျိုးသားအားကစားရုံနေရာက ချန်ယင်ရုန်အဆောက်အဦကို ရွှေ့ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီး အမျိုးသားအားကစားရုံကြီးမှာ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေး ရိက္ခာဝေပေးတာတွေ လုပ်နိုင်ပါ တယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၁ (The Nation)
မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ယာယီ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းဖွင့်လှစ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ရေဘေးဒဏ် ခံနေရသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအတွက် ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်း တစ်ခုကို ထိုင်းနိုင်ငံ နခွန်ပထုံခရိုင်ရှိ ရိုင်ခင်းဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ထိုင်းအလုပ်သမား ဝန်ကြီးဋ္ဌာနက (၂၃၊၁၀၊၂၀၁၁) ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် နေးရှင်းသတင်းစာ၌ ဖေါ်ပြထားသည်။
ရေကြီးမှုကြောင့် စက်ရုံများ ပိတ်ထားခဲ့ရသဖြင့် ထောင်ပေါင်း များစွာသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အနေဖြင့် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခြင်း၊ အခြား ရေဘေး ဒုက္ခသည်များကဲ့သို့ အကူအညီ မရရှိခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်သွားခဲ့ ကြသည်။
ထိုင်းအစိုးရ အနေဖြင့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား အကူအညီ ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ နှေးကွေးမှု၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုများကို (၂၅၊၁၀၊၂၀၁၁) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ ရှေ့နေများ ကောင်စီ၏ ကြေညာချက်တွင် ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ထားသည်။
နေးရှင်းသတင်းစာ၏ အဆိုအရ ထိုင်းအလုပ်သမား ဝန်ကြီးဋ္ဌာန အနေဖြင့် ရေဘေးဒုက္ခသည် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအတွက် ယာယီ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံ ရှေ့နေများ ကောင်စီ၏ တွန်းအား တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား မိမိတို့ နိုင်ငံသို့ ပြန်ခြင်းထက် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ရပ်တည်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး လုပ်ငန်းသစ်များ ရှာဖွေပေးမည်ဟု ထိုင်းအစိုးရ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်ကို နေးရှင်း သတင်းစာက ကိုးကားထားသည်။
“ထိုင်းအစိုးရ အနေနဲ့ အခုလို မြန်မာရေးဘေး ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း ဖွင့်ပေးပြီး အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေပေးမယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ပြန်သွားတဲ့ အလုပ်သမားတွေ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဂိတ်တွေမှာ ဂိတ်ကြေးတွေ ပေးနေရတယ်ဆိုတော့ သူတို့အနေနဲ့ ယာယီစခန်းတွေမှာ ခဏနေပြီး၊ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေကြတာ ပိုပြီးကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်”ဟု ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဖန်ငဒေသ အခြေစိုက် ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဖောင်ဒေးရှင်း၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးထူးချစ်က ပြောသည်။
ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ရေဘေး ကယ်ဆယ်ရေးကို လုပ်ကိုင်နေသည့် ကွန်ယက်အဖွဲ့နှင့် ထိုင်းအစိုးရ တာဝန် ရှိသူများသည် (၂၆၊၁၀၊၂၀၁၁)နေ့က ယာယီ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၌ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အရေးပေါ် လိုအပ်ချက်များ၊ အနာဂတ်တွင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ယခုကြုံတွေ့ နေရသည့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်သည် နှစ်ပေါင်း (၇၀)အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ပြီး၊ ခန့်မှန်းခြေ စာရင်းများအရ ထိုင်းအလုပ်သမား လေးသိန်းကျော်နှင့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား နှစ်သိန်းကျော် ရေဘေးဒဏ် ခံနေကြရသည်ဟု သိရသည်။
လူကုန်ကူး ခံခဲ့ရသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများမှာ အစိုးရ သက်သေအဖြစ် (၅)လတိုင်တိုင် အချုပ်ခန်းနှင့် အကျဉ်းထောင် တို့တွင် နေခဲ့ကြရသော်လည်း ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် လုပ်အားခများနှင့် နစ်နာကြေး တစ်စုံတစ်ခုမှ မရရှိခဲ့ကြောင်း ပြန်လည် ပို့ဆောင် ခံခဲ့ရသူများက ပြောပြသည်။
ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံး Don Muang လေဆိပ်ကိုလဲ ပိတ်ထားပါတယ်။ ဒီသီတင်းပတ်မကုန်ခင်ဘန်ကောက်တမြို့လုံး ရေတွေကြီးနိုင်တဲ့အတွက် ဒေသခံတွေ ဘေးလွတ်ရာ ပြေးနိုင်ကြဖို့လည်း အစိုးရက ၅ ရက် ရုံးပိတ်တယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။ Bus ကားဂိတ်တွေနဲ့ အဓိက နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာ လူပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ အပြည့်ဖြစ်နေပါတယ်။
ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး၍ မဲဆောက်သို့ ပို့ဆောင်မည့် မြန်မာ အလုပ်သမားများကို အချုပ်ကား တစီးပေါ်တွင်တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းစိုးဝင်းလတ်)
ပြန်ပို့ခံရသော မြန်မာအလုပ်သမားများ လှေပေါ်သို့ တက်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းစိုးဝင်းလတ်)
သောင်ရင်းမြစ်ကို လှေဖြင့်ဖြတ်၍ ပြန်ပို့ခံရသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းစိုးဝင်းလတ်)
မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ပြန်မပို့မီ မဲဆောက် လ၀က ရုံးတွင် တွေ့ရသော မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးများကို တင်ဆောင်ထား သည့် ကားတစီး (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းစိုးဝင်းလတ်)
ကမ္ဘာတစ်လွှားကို ရိုက်ခတ်စေတဲ့ ထိုင်းရေဘေးရဲ့ ဆိုးကျိုး
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နှစ်ငါးဆယ်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးရေကြီးမှုဟာ နိုင်ငံတွင်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဂျပန်စက်ရုံများကိုထိခုိုက်စေကြောင့် ကမ္ဘာ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုပါ ထိခိုက်လာလေမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကိုပါ တိုးပွားလာစေပါတယ်။
ယိုမီယူရီ ရှမ်ဘမ် ရဲ့ ယနေ့တင်ပြတဲ့ အစီရင်ခံစာအရဆိုလျှင် ဘန်ကောက်မြို့နှင် သိပ်မဝေးလှတော့တဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့တော် အယုဒ္ဓယနယ်မှာရှိတဲ့ အဓိကကျတဲ့ စက်မှုဇုန်ကြီး (၅) ခုဟာ ရေနစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ၎င်းနယ်ဟာ ဂျပန်ကားစက်ရုံများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာ စက်ရုံများ အများအပြားတည်ရှိရာ နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ စက်ရုံတွေဟာ အားလုံးရေနစ်နေပြီး စက်ရုံဧရိယအတွင်း လှေမပါလျင် သွားလာလို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံဟာ ပထမထပ် မျက်နှာကျက်အထိ ရေနစ်ခဲ့တယ်” လို့ စက်မှုဇုန်ကြီးတစ်ခုလုံး ဗွက်အိုင်ကြီးအဖြစ် ယုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ အဆင့်မြင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်တဲ့ ဂျပန်စက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကို အပြင်ကိုဆွဲထုတ်သယ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အပြင်မှာ အဲဒီပစ္စည်းတွေကိုထားသိုစရာနေရာရှာမတွေ့တော့တဲ့အတွက်ကြောင့် လက်လျော့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ် “ပစ္စည်းတွေကို ဆွဲထုတ်ကယ်တင်ဖို့ အချိန်လေးကို မရလိုက်ဖူးဗျာ” လို့ ၎င်းကပြောပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ၎င်းရေးကြီးမှုကြောင့် ကုမ္ဗဏီ ၃၂၀ လောက်ဟာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကုမ္ဗဏီတွေအားလုံး အပြည့်အ၀ပြန်လည် လည်ပတ်နိုင်ဖို့ဆိုလျင် လ အတော်များများကြာအောင် အချိန်ယူရဖွယ်ရှိပြီး တခြား အစားထိုးကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်အောင် သို့မဟုတ် တခြားထိရောက်မယ့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုကို သူ့ထက်ငါ အလုအယက်ကြိုးပန်းရှာဖွေနေကြပါတယ်။
Merrill Lynch Japan Securities Company ရဲ့အဆိုအရ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားလည်ပတ်မှုထဲက အဓိကျတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများတည်ရှိ ရာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရေရှည်ပျက်စီးမယ်ဆိုပါက ကမ္ဘာ့ကုန်ထုတ်စွမ်း အားကိုပါ ထိခုိုက်လာနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကတော့ အခုရေကြီးမှုဟာ ဂျပန်အရှေ့ဘက်ကမ်းရုံးတန်းမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ မြေငလျင်လုပ်မှုနဲ့ နယူးကလီးယားအကျိုးဆက် ကပ်ဆိုက်တဲ့အဖြစ်နဲ့ အလားတူတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အယုဒ္ဓယနယ်၊ ရိုဂျနာ မှာရှိတဲ့ ဂျပန် ဟွန်ဒါ ကားကုမ္ဗဏီကတော့ ၎င်းရဲ့ စက်ရုံကို အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့ကတည်းက ရပ်နားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီစက်ရုံဟာ ဟွန်ဒါရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ အကြီးဆုံး ကုမ္ဗဏီလည်းဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်ဈေးကွက်အတွက် ခရီးသည်တင်ကားနှင့် Brio ကားများအပါအ၀င် ကားအစီးရေ ၂၄၀၀၀၀ (နှစ်သိန်းလေးသောင်း) ကိုထုပ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကားကုမ္ဗဏီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စက်ရုံတွင်းအခြေအနေတွေကို အခုအချိန်အထိတော့ အတည်ပြုချက်မထုတ်ပြန်နိုင်သေးဘူးလို့ ဟွန်ဒါစက်ရုံ အရှာရှိတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
ရေနစ်သွားတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ အသုံးအဆောင်တွေအကုန်လုံး ပြန်လည်ပြုပြင်နေရာချထားရတာမျိူး လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေ ပျက်စီးမှုဟာ အချိန်ကြာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တိုယိုတာ ကားကုမ္ဗဏီကတော့ သံမဏိကားဘီးအတွင်းခွေထုပ်လုပ်ရေး အပါအ၀င် စက်ရုံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ရယ် တခြား၎င်းစက်ရုံတွေနှင့် လမ်းတွေရေထိခဲ့တာကြောင့် လာမည့် စနေနေ့အထိ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေအားလုံး ရပ်ဆိုင်းထားရဖွယ်ရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။
တိုယိုတာကုမ္ဗဏီရဲ့ အခြေအနေဟာ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ ဒီကုမ္ဗဏီဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားအခြေစိုက်ကုမ္ဗဏီတွေထဲမှာ အမေရိကန်နှင့် တရုပ်နိုင်ငံတွေပြီးလျင် တတိယ အကြီးဆုံး ကုမ္ဗဏီလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ဗဏီဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ကားအစီးရေ ၆၃၀၀၀၀ (ခြောက်သိန်းသုံသောင်း) ကိုထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ကားကုမ္ဗဏီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဆုံးရှုံးမှုကို ကွက်လပ်ဖြည့်နိုင်အောင် ဂျန်ပန်နိုင်မှ ရေလမ်းကြောင်းဖြင့် တခြားနိုင်ငံများကို ကုန်ပစ္စည်းများ ပို့ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်း ပြောပါတယ်။
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတွေဟာလည်း ထိုင်းထုတ်ကုန်တွေအပေါ်တွေ အများကြီး မှီခိုနေရပြီး
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ Nokia ကုမ္ဗဏီဟာ ၎င်းရဲ့ အလည်လတ်တန်းစား အများသုံးနိုင်မယ့် ကင်မရာတွေကို ထိုင်းနို်င်ငံမှာ ထုတ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ ကုမ္ဗဏီရဲ့ SLR ကင်မရာထုတ်လုပ်ခြင်းရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်းနှုန်းအထိ ရှိတယ်လုို့ပြောတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် SLR ကမ်မရာတွေ အားလုံးထုတ်လုပ်တဲ့ Sony ကုမ္ဗဏီဟာလည်း အယုဒ္ဓယနယ်မှာ ဘဲတည်ရှိပါတယ်။
တခြားကုမ္ဗဏီတွေကို ကုန်စီဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်ပတ်သက်လုို့ ကားအတွင်းပိုင်း အင်ဂျင်မော်တာထုတ်လုပ်တဲ့ Nidec ကုမ္ဗဏီဟာလည်း အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့ကတည်းက ၎င်းရဲ့ ထုပ်ကုန်တွေကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။
ဘန်ကောက်က ရေတံခါးတွေ ဖွင့်လိုက်ပြီ
ဒွန်မောန်နဲ့လက်ဆီခရိုင် တစိတ်တဒေသကို ရေဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့ဒေသတွေအဖြစ် မနေ့က ကြေညာလိုက်တဲ့ အတွက် မြောက်ပိုင်းက ထိုးကျလာတဲ့ရေတွေကို မြို့တော်တူးမြောင်းတွေကတဆင့် ပင်လယ်ထဲကို စီးထွက်စေဖို့ ဘန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်ရှိ အဓိကတူးမြောင်း ၁၉ခု
ဒွန်မောန်ခရိုင် ဒွန်မောန် ခရိုင်ခွဲနဲ့ သွန်းဆီခန်နဲ့ လက်ဆီခရိုင်က ထွန်းဆောင်ဟောင်ခရိုင်ခွဲတွေမှာ နေထိုင်တဲ့သူတွေ အတွက် ရေဘေးသတိပေးကြေညာချက်ကို မနေ့ညက ဘန်ကောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဆူခွန်ဟန်းဖာရိဘတ်ထရာက ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒုတိယအကြိမ် သတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တခါက ခရိုင် (၇)ခုကို ထုတ် ပြန်ခဲ့တဲ့သတိပေးကြေညာချက်မှာတော့သူတို့ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို မြင့်တဲ့နေရာကိုပဲ ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ရေဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အရ ဘန်ကောက်က ရေတံခါးတွေအကုန်လုံး ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ဘန်ကောက်မြို့တော် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဆူခွန်ဟန်း က မနေ့က ပြောပါတယ်။
ရေတံခါးတွေအကုန်လုံးဖွင့်ပစ်ရမယ်။ ရေတွေ တိုက်ရိုက် စီးထွက်အောင်လုပ်ရမယ်။ ရေတားတံတိုင်းတွေက နောက် ထပ်ဝင်လာတဲ့ရေတွေကိုပဲ ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ လို့ ၀န်ကြီးချုပ် ခွန်ယင်လပ်က ပြောပါတယ်။
ရေမြုပ်နေတဲ့ လန်စစ်ဈေးအနီးက မြင်ကွင်း
လန်စစ်ပထုံဌာနရီလမ်းမကြီးပေါ်မှာ သူ့ခွေးတွေသယ်လာတဲ့ မိန်းမကြီးတယောက် မြင်ကွင်း
ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် အိမ်သာလုပ်ဖို့ ပလပ်စတစ်ထိုင်ခုံတွေကို အပေါက်ဖောက်နေတဲ့ ချူလာလောင်ခေါန်တက္ကသိုလ်က နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေ
အယုဒ္ဓယ၊ ဥထိုင်းခရိုင်က အာရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကျောက်အိတ်တံတိုင်းတွေ နဲ့ရေတားနေပုံ
နွန်ဌာဘူရီခရိုင်၊ ဘန်းဘွာထုန်မှာ ရေလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့ အဖိုးအိုကို အိမ်နီးခြင်းတဦးက ကူနေပုံ
ချာအန်းဝပ်သာန လမ်းမအနီး ခလုန်ဖရားပါလမ်းတလျှောက် မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးလာကြပုံ
အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၁ (ဘန်ကောက်ပို့စ်)
ဘန်ကောက်မြို့အတွင်းပိုင်း ရေလွှမ်းတော့မည်ဟု ထိုင်းအစိုးရ သတိပေး
ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ တူးမြောင်းတွေက ရေတံခါးအားလုံးကို ဖွင့်ချဖုို့ ထုိုင်းအစိုးရက ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက် ဘန်ကောက်အတွင်းပိုင်း ရက်ကွက်ဇုန်တွေကို ရေလွှမ်းမိုးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့တော်အထက်က နခွမ်စ၀မ်၊ချိုင်နာ့၊ အယုဒ္ဓယ၊ နခေါင်ပထုံ စတဲ့ ခရိုင်တွေမှာ ၂ လခန့်ကြာအောင် လွှမ်းမိုးနေတဲ့ရေတွေကို ပင်လယ်ထဲအမြန်ဆုံးစီဆင်းဖို့အတွက် ကြားမှာခံနေတဲ့ ဘန်ကောက်မြို့တော်ကို ရေဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ လမ်းဖွင့်ပေးတော့မယ်လို့ မနေ့ညနေပိုင်းမှာ ထိုင်းအစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့တော်ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့ ကျောက်ဖုရားမြစ်နှင့် ဆက်သွယ်နေတဲ့ တူးမြောင်း ၁၁ ခုက ရေတံခါးတွေကိုလည်း လုိုအပ်သလုို ဖွင့်ချမယ်လုို့ဆုိုပါတယ်။
ရေတံခါးတွေဖွင့်ချာတာကြောင့် စနေနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်က စပြီး ဘန်ကောက်အတွင်းပိုင်းက ဖဟိုယိုထင်၊ လော့ဖရောင်း၊ ရာမ ၉၊ ဖက်ခ်ျဘူရီ၊ စူခွန်ဗစ်၊ ရာမ ၄ စတဲ့ လမ်းတွေနှင့် ရပ်ကွက်ဇုန် အများအပြားကို ဒူးဆစ်မှ ခါးအထိ ရေတဖြည်းဖြည်းလွမ်းမိုးသွားမှာပါ။
၂ လလောက်ကြာအောင် ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ တစိတ်သဒေသ ရေလွှမ်းမိုးမယ်လို့ ထုိုင်းအစိုးရဌာနတွေနှင့် အထူးပညာရှင်တွေက ထိုင်းရုပ်သံအစီအစဉ်ကနေ ပြောဆိုလုိုက်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေထဲက မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုတော့ နိုင်ငံတကာ ဒုက္ခသည်ကော်မတီ (အိုင်အာစီ) အပါအ၀င် အဖွဲ့အစည်း ၂၀ ကျော်ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Migrant Worker Group က ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း အဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပြပါတယ်။
“ဘန်ကောက်မှာတော့ ဘယ်နေရာတွေမှာ ရေဘယ်လောက်တက်မယ်၊ စင်တီမီတာ ဘယ်လောက်အထိတက်မယ် ဆိုတာကို သတ်မှတ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေဆိုရင် သူတို့ရဲ့ အရေးကြီးပစ္စည်း၊ စာရွက်စာတမ်းတွေသိမ်းထားဖို့ လိုပါတယ်။ အကူအညီပေးမယ့် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ဖုန်းနံပတ်တွေကိုလည်း သိထားဖို့လုိုပြီး အရေးပေါ်တော့ အကြောင်းကြားလုို့ရတာပေါ့။”
ရေဘေးသင့် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အရေးပေါ်အကူအညီ တောင်းနုိုင်ဖို့ ဖုန်းနံပတ်တွေထဲက တချို့ကတော့ ၀၈၂-၄၉၈၉၅၈၅၊ ၀၈၁-၆၈၄၀၆၁၂၊ ၀၈၁-၄၅၂၇၂၂၁၊ ၀၈၅-၉၂၂၈၄၅၁၊ ဝ၈၅-၃၂၆၈၂၆၃၊ ဝ၈၁-၆၂ဝ၄၄၈၆၊ ဝ၈၅-၃၃၂၇၅၅၃၊ ဝ၈၃-ဝ၆၂၇၅၄၃၁၊ ဝ၈၄-၆၃၇၅၂၇၁စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနံပတ်ကို မြန်မာစကားနဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
ခလောင် ရမ်စစ်က ရေဟာ ဒီညမှာ ဘန်ကောက်မြောက်ဘက်ပိုင်း စိုင်မိုင် နယ်ထဲက ခလောင် ဟော့ဝါကို စတင်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး မနက်ဖန်မှာ ဘန်ကောက်ကို စတင်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ ဘန်ကောက်အုပ်ချူပ်ရေးမှုး Sukhumbhand Parigatra က အင်္ဂါနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ယမန်နေ့က ကြေငြာခဲ့တဲ့ အန္တရာယ်ဇုန် (၇) ခုထက်ပိုပြီး မကျော်လွန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘန်ကောက်နေ ပြည်သူလူထုကို အထိတ်တလန့်မဖြစ်ဖို့ သူ့အနေနှင့်ပန်ကြားထားပါတယ်။
မြို့တော်ရဲ့ မြောက်ဘက်ပိုင်းသို့ ရေများ စီးဝင်လာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ၎င်း အန္တရာဇုန် (၇) ခုဖြစ်တဲ့ Sai Mai, Klong Samwa, Bang Khen, Nong Chok, Min Buri, Lat Krabang, Kannayao မြို့နယ်တွေမှာနေကြတဲ့ ပြည်သူများကိုတော့ သတိနှင့် နေကြဖို့နှင့် မိမိတို့ရဲ့ အဖိုးတန် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအား ရေလွတ်ရာ အထပ်မြင့်များသို့ ရွှေ့ပြောင်းထားကြရန် အသိပေးနှိုးဆော်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။
ဘန်ကောက်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ဘန်ကောက်ဧရိယာအပြင်ဘက် အရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေကိုလဲ ကူညီဖို့ . အစိုးရအားပန်ကြားထားပြီး ၎င်းတို့အနေနှင့် အင်္ဂါနေ့စောစောပိုင်းလောက်က Klong Prapa နယ်ကနေ လျှံကျလာပြီ Chang Wattana, Ngamwongwan နှင့် Prachachuen ထဲက လမ်းတွေပေါ်ကိုဝင်လာတဲ့ရေတွေကို ရေစုပ်စက်တွေနှင့် စုပ်ယူပေးနေကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီ Klong Prapa ကရေတွေဟာ Pathum Thani ဘက်ကနေ စီးဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံလေဆိပ်များရဲ့ အကြီးအမှုးဖြစ်တဲ့ စူမက် ဖိုတီမနီကတော့ စုဝဏ္ဏဘူမိနှင် ဒိုမောင်း လေဆိပ်တွေရဲ့ အဓိကကျတဲ့နေရာတွေကိုတော့ အသေအချာ ကာကွယ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ချရလောက်တဲ့အနေထားကို သူမျှော်လင့်ကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေအရ စုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်ကို ၃.၅ မီတာမြင့်တဲ့ ရေတားတွေတည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် မြောက်ပိုင်းကနေ အလုံးအရင်းနှင့် စီးဝင်လာနေတယ်တဲ့ရေတွေကြောင့် ဒုံမောင်းလေဆိပ်အတွက် သူစိတ်မအေးနိုင်သေးကြောင်း၊ ဒီအတွက် အပြည့်အ၀ ထိမ်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ယာယီရေကာတာတွေကို သဲအိပ် ၁၀၀၀၀ သုံးပြီး ထပ်မြှင့်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောပါတယ်။
စုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်အတွက်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံ လေဆိပ်အာဏာပိုင်များအနေနှင့် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသမျှ ရေဘေးအခြေအနေတွေကို အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက အားလုံးအသင့်အနေအထား ရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဆပ်စပ်လုပ်ငန်းရှင်အားလုံးကို ၎င်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းများကို ချွန်ဘူရိ၊ အူတာပါအိုနှင့် တခြားလေဆိပ်တွေမှာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်လိုက လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းကိုလည်း ၎င်းတုို့က ကြေငြာထားပါတယ်။
ပထုမ်ဌာနီ၊ ဆမ်ခေါ့ခရိုင်က ခလုန်ဘန်ဖရောက်ရပ်ကွက်က တူးမြောင်းဂိတ်တံခါးကို ပြင်ဆင်ဖို့ အာဏာပိုင်တွေ
သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီး ဖလော့ဖရာဆော့ပ်ဆူရာ့ဆ၀ါဒီးက ရေဘေးကင်းလွတ်တဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းရေး သတိပေး နှိုး ဆော်ချက်ကို မှားယွင်းတဲ့ ဘေးအန္တရာယ်သတိပေးမှုအဖြစ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက်မှာ ဘန်ကောက် မြောက်ပိုင်းနဲ့ မြို့ တော်အတွင်းပိုင်ဒေသတွေမှာ နေသူတွေဟာ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ် ကုန်ကြပါတယ်။
မနေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၃၀ မီးနစ်ဝန်းကျင်လောက်က ဒွန်မောင်းလေဆိပ်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ရေဘေးကယ်ဆယ်မှု စစ်ဆင်ရေး ဌာနမှာ ရွှေ့ပြောင်းရေးနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေး စစ်ဆင်ရေးအကြီးအကဲ၊ ဖလော့ဖရားဆော့ပ်က ဘန်ကောက်မြောက် ပိုင်းနဲ့ပထုမ်ဌာနီမှာနေတဲ့သူတွေအတွက် ရွှေ့ပြောင်းရေးသတိပေးနှိုးဆော်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ မစ္စတာ ဖလော့ ဖရားဆော့ပ်က ပထုမ်ဌာနီ၊ ဆမ်ခေါ့ခရိုင်က မြောက်ဖက်က စီးလာတဲ့ရေအဟုန်က ခလုန်ဘန်ဖရောက်ရပ် ကွက်က တူး မြောင်းဂိတ်တံခါးကို ချိုးဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ လို့ ကြေညာခဲ့တယ်။
လန်စစ်မြောက်ပိုင်းနေသူတွေ၊ ပထုမ်ဌာနီ၊ ခလုန်လူအန်းနဲ့လမ်လပ်ခါခရိုင်မှာ နေသူတွေ၊ ထမ္မာဆတ်တက္ကသိုလ်နဲ့ လန် စစ် တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲ နေသူတွေ၊ ဘန်ကောက်၊ ဆိုင်းမိုင်ခရိုင်မှာနေသူတွေအကုန်လုံး ဘေးကင်းတဲ့နေရာကို ရွှေ့ကြဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာတွေမှာ ရေတမီတာလောက် လွှမ်းသွားနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြောင်း ဖလော့ဖရား ဆော့ပ် က ပြောပါတယ်။ “ဒါကြောင့် ဒွန်မောင်းလေဆိပ်ကို ချက်ချင်းပြောင်းကြဖို့၊ နာရီဘယ်လောက်ပဲ ကျန်တော့မလဲ ဆိုတာ အစိုးရအနေနဲ့ မပြောနိုင်ကြောင်း” ဖလော့ဖရားဆော့ပ်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပြောအပြီး မကြာခင်မှာပဲ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဌာန၊ အကြီးအကဲ၊ တရားရေးဝန်ကြီး ဖရားချာဖရွမ်နော့က အေးအေးဆေးဆေး နေကြဖို့ ပြည် သူတွေကို ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီဌာနအနေနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းရေးသတိပေးနှိုးဆော်ချက်ကို မထုတ်ပြန် ကြောင်း၊ အစိုးရက ဘန်ကောက်က ရေကြီးတဲ့အခြေအနေတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြောင်း ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖရားချာ က ပြောပါတယ်။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ မရှိပါဘူးလို့ ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖရားချာက ပြောပါတယ်။
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဒီ ဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကို စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်လို့ သူက ထပ် ပြောပါတယ်။
မစ္စတာ ဖလော့ဖရားဆော့ပ်ရဲ့ မှားယွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ရွှေ့ပြောင်းရေးသတိပေးနှိုးဆော်ချက်ကို ၀န်ကြီးချုပ်ခွန်ယင်လပ်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အကြီးအကျယ် စိတ်ပျက်မိကြောင်း ရဘေးကယ်ဆယ်ရေးဌာန သတင်းရပ်ကွက်က ပြောပါ တယ်။ ဘန်ကောက်အတွင်းပိုင်းဒေသတွေနဲ့ ရေဘေးအတားအဆီးတွေလုပ်ထားတဲ့ ဒေသတွေက ရေလွှမ်းတာတွေကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူယုံကြည်တဲ့အကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ်က ပြောပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၁ (ဘန်ကောက်ပို့စ်)
ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဓယမြို့ ရေကြီးနေသော ဓာတ်ပုံမြင်ကွင်းများ
ရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ကူညီရေးပစ္စည်းများ (ဧရာဝတီ)
အသက်ကြီးရွယ်အိုများအား ရေဘေးလွတ်ရာသို့ အရေးပေါ်ကယ်ဆည်။ (ဧရာဝတီ)
ရေကြီးလို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလည်း ထိခိုက် (BBC)
ကားလမ်းမတွေဟာ မြစ်ချောင်းပုံစံဖြစ်နေ (BBC)
ဗင်းနစ်မြို့လား ၊ အယုဒ္ဓယလား (BBC)
ဟွန်ဒါကားစက်ရုံဝင်းအတွင်း ရေတွေဝင် (BBC)
ကားလမ်းတွေပေါ် ရေတွေတက် (BBC)
အယုဒ္ဓယမြို့က လမ်းမများ (BBC)
ရှေးဟောင်းဘုရားဝင်းအတွင်းလည်း ရေတွေလွှမ်း (BBC)
ဟီးဟီး မောလိုက်တာ ပို့ကအရှည်ကြီးပဲ အားလုံးကို သိစေချင်လို့ ရှဲတာ များသွားတယ်
ဘန်ကောက် ရေကြီးမှု နောက်ဆုံး အခြေအနေ
ယနေ့နေ့ လည် ပိုင်း တွင် ဘန်ကောက် မြို့ရှိ ဘန်ကောက် ဘဏ် ၊ ခွန်ထိုင်း ဘဏ်တို့ ဘဏ်
ခွဲ နှင့် ATM စက်ပေါင်း ၃၈၉ ခု ကို ပိတ် လိုက် ရသည်။
ရေလွှမ်းမိုး မှု သည် နောသန် ဘူရီ ရှိ ယခင် ၀န်ကြီး ချုပ် ဟောင်း ဘန်ဟန် ဆီပါ အာ ချာ နှင့်
ဘန်ကောက် Charansanitwong Road လမ်းရှိ ထိုင်းဝန်ကြီး ချုပ် ဟောင်း သက်ဆင်ရှင်
နာဝတ် တို့ ၏ အိမ်များ ကို ပါ ရေ နစ် မြုပ် နေသည်။
လက်ရှိ ၀န်ကြီးချုပ် ယင်လပ် ရှင်နာဝတ် ၏ ရေဘေး ကယ်ဆယ် ရေး ကူညီ ကမ်းလှမ်းချက်
ကို ထိုင်းဝန်ကြီး ချုပ် ဟောင်း အဘီဆစ် ၀ိဇ္ဇာဇီဝ က လိုလိုလား လက်ခံ ခဲ့သည်။
ယမန် နှစ်က ဆန္ဒပြ ခဲ့ မှု တွင် အကြမ်းဖက် မှု များ ကျူးလွန် ခဲ့ သည် ဆိုသည့် ရှပ် နီဝတ်
ဆန္ဒပြ သူ ၁၄ ဦး ကို ထောင် ဒဏ် နှစ် ၂၀ ချမှတ် ခဲ့ သည်။
ရေလွှမ်း မိုး မှု ဒဏ် ခံနေရသည့် ဘန်ကောက် ဒေသခံ များ ဟွာဟင်း ၊ပတ္တယား ၊ ဖူးခက်
ကန်ချနာ ဘူရီ ၊ ဆူရတ်ဌာနီ စသည့် ဒေသ များ သို့ထွက် ခွာ
ဘန်ကောက် ရေဘေး အတွက် ထိုင်း ပြည်သူများ နှင့် မြို့ တော် အတွက် စိုးရိမ် စိတ် ဖြစ် ကြောင်း
အသက် ၈၃ နှစ် အရွယ်ရှိ ထိုင်း ဘုရင် နှင့် မိဘုရား ပြော
ဘန်ကောက် မြို့၏ နေရာ အချို့တွင် ၈. ၄ ပေ ခန့် ထိ ရေ နစ် မြုပ် နေ
ရေဘေး ကယ်ဆယ် ရေး အတွက် ထိုင်း တပ်မတော် မှာ စစ်သား ၅၀၀၀ က ကူညီဆောင်ရွက်
ဘန်ကောက် မြို့ တော် ၏ မြဘုရား တည် ရှိ ရာ Grand Place နှင့် အခြား သမိုင်း ၀င် နေရာများ
ကို ရေလွှမ်း မိုး နေ
ကောင်းတယ်ဗျာ။ ရွာထဲကနေ ဘယ်မှ လျှောက်မလည်တတ်တဲ့
ကျွန်တော့် အတွက်တော့ တော်တော် ပြည့်စုံစေပါတယ်။
ပြောသာပြောတယ် ဘလက်ချောရေ ကိုတင်တဲ့စာကို မနည်းကုန်အောင်ပြန်ဖတ်ရတယ်း) ဆိုးလိုက်တာဗျာ ထိုင်းက ရေးကြီးတာ. နိုင်ငံရဲ့ 60 % ရေလွှမ်းနေပီး(
ထိုင်းမှာ ဈေးသွားပတ်လို့ မရတော့ဘူး။
ထိုင်းလည်း တော်တော် ထိ သွားမှာပဲ..
ဈေးဝယ် မြို့ကြီး ရေမြုပ်နေပြီ။
နယ်စပ်က ကားတွေ ရေကြီးလို့ ထားမရတော့လို့ ဂျပန်ပြန်ရောက်ကုန်ပြီ ဆိုလား
အခုလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပို.စ်အရှည်ကြီးကို စိတ်ရှည်ရှည်တင်းပေးတာကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
တကယ်လို.များ ကျွန်တော်တို.ဆီ မှာ အဲလိုဖြစ်ရင် ဘာဖြစ်လာမလဲမသိဘူးနော်..
ဟီးဟီး အဖြေက တစ်ခုပဲရှိတယ် သေမှာပေါ့ ရွှေတိုက်စိုးရယ် …
နာဂစ်တုန်းက ဘယ်လောက်သေလည်း ..အခုဟာက နာဂစ်ထက်တောင်ဆိုးသေးတယ် နာဂစ်က ဖျာပုံခရိုင် ဧရာဝတီတိုင်း အများဆုံးပဲထိတာလေ အခုဟာက နိုင်ငံရဲ့ 60 % ဆိုတော့ အဲလိုသာ မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ရင် ရေဝေးမှာတောင်တန်းစီချိန်မရဘူးဖြစ်သွားမယ်း)
ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်ရော ဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ၊ တွက်ချက်မှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုနေပြီလို့